Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...
Latest News Galiin Qarshii Sassaabuu Qofa Miti...
Kabajamoon I/A/Pir.BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Tajaajila irraa barbaadamu akkaataa eegamuun kennuu dhabuun sekteroota mootummaa sadarkaa duraatti Uummanni komii irraa qabu keessaa tokko sektera galii waan ta’eef Mootummaan dallansuu Uummata kana hubachuunsirreessuuf xiyyeeffannoo olaanaa itti kennee hordofaa jira jedhan. Fedhii hawaasaa dabalaa jiru guutuun kan danda’amu yoo galiin duguugamee sassaabame qofa. Waan kana ta’eef rakkoo sektera galii hiikuu keessatti qaamni hunduu tumsuu akka qabu dubbatan. Raawwiin sassaabbii galiis kan gadi bu’eef maddi galii dhibee utuu hinta’in haqummaan waan hir’ateef kan kaffalu gammadee hinkaffalu, kan kaffalchiisuus onnatee hamileen kaffalchiisuu hindandeenye jedhan. Ka’umsimmoo rakkoo kirasassaabdummaa hojimaata sassaabbii galii keessatti mul’atu keessumaa hojii oditiin walqabatee komii fi sodaa uummanni qabu guddaa waan ta’eef hooggansii fi hojjattoonni sektera kanaa hatattamaan kana sirressuun maqaa badaa kana jijjiiruu akka qaban akeekkachiisan.
Rifoormiwwan fi Teekinolojii Qunnamtii fi Odeeffannoo ba’anii jiran sirriitti hojii irra oolchuu fi hojii ofii mo’achuun quuqamaan hojjachuun barbaachisaadha jedhan. Hojii tilmaama galii guyyaa bara kana gaggeeffamu keessatti yoo dhugaa fi haqaan hojjanne madaan uummata keenyaa fayyuu jalqaba, haaromsi keenyas ni dhugooma waan ta’eef kanaanis sadarkaa kaffaltoota gibiraa keenyaa sirriitti murteessuu, madda galii babal’isuu fi haqa mirkaneessuu waan dandeenyuuf akka mootummaatti xiyyeeffannoo addaatiin kan hoogganamu ta’e ibsaniiru.
Walumaagalatti, uummata waliin sirriitti araaramuuf sekteroota irratti hojjatamuu qaban akka mootummaatti adda ba’an keessaa tokko sektera galii waan ta’eef Mootummaan rakkoo sekterichi qabu furuu fi deggarsa barbaachisaa ta’e hundaa gochuun gama hundaan kan cina dhaabbatu ta’uu mirkaneessaniiru.